अफेयर र अबोर्सनको आरोपमा सामन्था: ‘मलाई बच्चा चाहिएको थिएन, म अवसरवादी हुँ' ? - Updatekhabar.com Updatekhabar.com
अफेयर र अबोर्सनको आरोपमा सामन्था: ‘मलाई बच्चा चाहिएको थिएन, म अवसरवादी हुँ’ ?
एजेन्सी । दक्षिण भारतीय फिल्मकी अभिनेत्री सामन्था प्रभु अक्किनेनी यतिबेला आफ्नो र नागा चैतन्यसँगको डिभोर्सका कारण चर्चामा छिन् । विवाह बन्धनमा बाँधिएको ४ वर्षमै उनीहरुले वैवाहिक सम्बन्ध टुंग्याउने निर्णय गरेका हुन् । तेलुगू इन्डस्ट्रीमा उनीहरुलाई ‘आदर्श जोडी’ भनिन्थ्यो । यो जोडीको डिभोर्सको खबर अझै धेरैले पत्याउन सकेका छैनन् ।
एकातिर सामन्थाको वैवाहिक जीवन अन्त्य भएको छ भने अर्कोतिर उनीमाथि विभिन्न खाले आरोप लागेका छन् । यस्तैमा उनले आफूमाथि लागेका आरोपहरुको खण्डन गरेकी छन् । इन्स्टाग्राम पोस्टमा सबै समर्थकलाई धन्यवाद दिँदै उनले लेखेकी छन्, ‘मेरो यो नीजि नोक्सानमा तपाईंहरुको भावनात्मक आबद्धताले मलाई खुसी दिएको छ । मसँग गहिरो संवेदना राख्नेहरुप्रति आभारी छु ।’
आफूमाथि लागेको आरोपको बारेमा उनले अगाडि लेखेकी छन्, ‘मलाई बच्चा चाहिएको थिएन, म अवसरवादी हुँ र मेरो अबोर्सन भएको छ भन्ने खालका अफवाह फैलाइयो । तर, यो कोही किन सम्झँदैन कि डिभोर्स आफैंमा एउटा दर्दनाक प्रक्रिया हो । मलाई यो मुश्किल घडीको सामना आफैंलाई गर्न दिनुहोस् । तर, म वाचा गर्छु कि यी कुनै प्रकारका अफवाहले मलाई टुट्न दिने छैन ।’
नागा चैतन्य र समान्थाले सन् २०१७ मा बिहे गरेका थिए । नागाका पिता तथा साउथ सुपरस्टार नागार्जुनसँग पनि सामान्थाको राम्रो बोन्डिङ थियो । छोरा र बुहारीको डिभोर्स भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै नागार्जुनले भनेका छन्, ‘भारी मनबाट यो भन्नु परेको छ कि उनीहरुबीच जे भयो त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । दुवैमा मेरो निकै प्रेम छ । हाम्रो परिवारसँग सैमले विताएका क्षण कहिल्यै भुल्ने छैन